သီယာဂို ပွနျပါလာတာနဲ့အမြှ ပွောငျးလဲတိုးတကျသှားမယျ့ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အခွအေနေ Q&A… – Sports A2Z
ဒီတပတျမှာတော့ လီဗာပူးလျ အမာခံပရိသတျတဦးဖွဈတဲ့ Hasib Afzal နဲ့ အမေးအဖွေ ဆှေးနှေးခနျးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အမွငျတှကေို ရှုစားကွညျ့ကွပါဦး။
လကျစတာကို နိုငျခဲ့လို့ ဘယျလောကျအကြိုးကွီးမားခဲ့လဲ?
ဒီရာသီရဲ့ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျပါပဲ။ ဒါကို သံသယ မရှိပါဘူး။ ပှဲမတိုငျမီမှာတော့ စိုးရိမျစိတျတှေ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဒဏျရာရထားတဲ့ ဗနျဒိုကျ၊ ဂိုးမကျဇျနဲ့ အာနိုးလျဒျတို့ မပါဝငျတဲ့ ခံစဈကို ဂမြေီ ဗာဒီတောငျ ဝငျမတိုးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဟာ​ဗေး ဘားနကျဈရဲ့ အခှငျ့အရေးတကွိမျက လှဲရငျ လကျစတာဆိုတာ ရမွှေဖွေဈသှားအောငျ လုပျပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
လကျစတာနဲ့ပှဲမှာ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ နာဘီ ကီတာ ဒဏျရာရခဲ့တာကို ဘယျလိုပွောမလဲ?
သူ သိပျကောငျးခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ထိရောကျတဲ့ ဖနျတီးမှုကနေ ကားတဈ ဂြုံးဈရဲ့ အခှငျ့အရေးကို ရခဲ့တယျမလား။ လကျစတာကှငျးလယျကို အပွတျအသတျသာစခေဲ့တယျ။ High Press လုပျပွီး ဘောလုံးမရှိတဲ့အခြိနျမှာ အတကျအဆငျးမှနျခဲ့တယျ။ ဒါက ကီတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပွခဲ့ပမေယျ့ တံကောကျကွောဒဏျရာရသှားခဲ့တာက ကံဆိုးသှားခဲ့ပါတယျ။
အယျလျကနျတာရာ ပွနျပါလာမှာက ဘယျလောကျ အရေးပါလာနိုငျမလဲ?
သိပျကိုထူးကဲသှားမယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဖာဘငျညိုနဲ့ ဟနျဒါဆနျတို့ ကစားခဲ့တဲ့ နံပါတျ ၆ နရောကို တာဝနျယူနိုငျသလို သူက သာမနျကှငျးလယျထောကျတိုငျတဦးထကျပိုပွီး ကှဲထှကျနပေါတယျ။ သူ့ရဲ့ အားသာခကျြက အသငျးရဲ့ ဘောလုံး ပိုငျဆိုငျမှုကို ကွာကွာထိနျးသိမျးထားစနေိုငျတာပါ။ ဒီတော့ လီဗာပူးလျအနနေဲ့ ဘောလုံးကို ကိုယျ့ခွထေဲမှာ တခြိနျလုံး ဘောလုံးကိုငျထားပွီး ပွိုငျဘကျအသငျးကို မောငျးကစားလို့ ရပါတယျ။ ဗဟိုခံစဈမှာ ကစားမယျ့ ဖာဘငျညိုကိုလညျး လှတျလပျသှားစမှောက သူပေးလာမယျ့ အပိုဆုဖွဈပွီး ခံစဈပိုငျးလုံခွုံမှုကို ရပါလိမျ့မယျ။
ပှဲစဥျဇယားရေးဆှဲမှု နဲ့ ၃ ကွိမျသာ လူစားလဲခှငျ့အတှကျ ကလော့ပျ ဒေါသထှကျနတေယျနျော?
ဒါက ကလော့ပျတငျ မဟုတျပါဘူး။ ဂှာဒီယိုလာနဲ့ ဆိုးလျရှားတို့လညျး စောဒကတကျနကွေတဲ့ အရေးကိစ်စပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးမှနျဆုံး ခွစှေမျးပုံစံကို မွငျခငျြရငျ ကစားသမားတှအေတှကျ လုံလောကျတဲ့ အနားယူခြိနျ လိုအပျတာ ထငျရှားပါတယျ။ ဥရောပပှဲစဥျတှကေိုပါ တပွိုငျတညျး ကစားနရေတဲ့ အသငျးကွီးတှကေတော့ လကျရှိ ပှဲဆကျမှု အခွအေနကေို စိတျပကျြကွမှာပါပဲ။ လီဗာပူးလျ နဲ့ ယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ ဒဏျရာအကပျြအတညျးက ဒီပွဿနာအတှကျ အကောငျးဆုံးသကျသေ ဖွဈနပေါတယျ။
အတ်တလနျတာကိုနိုငျရငျ ၂ ပှဲကနျြအနအေထားနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျရှုံးထှကျအဆငျ့ကို တကျမယျ့အပျေါအမွငျ? ဒါက ဘယျလောကျ အရေးကွီးမလဲ?
ဒဏျရာအကပျြအတညျး ကွုံနရေတဲ့ ကလော့ပျအတှကျတော့ သူ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှကေို အနားပေးခှငျ့ ရသှားပွီပေါ့။ မီနာမီနို နဲ့ ဆီမီကကျဈတို့ အခှငျ့အရေး ရလာမှာပေါ့။
ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျဖို့ ဇနျနဝါရီမှာ ဗဟိုခံစဈမှူးတယောကျ ချေါနိုငျလား?
စိတျကွိုကျကစားသမား ရှာမရသရှေ့ လီဗာပူးလျက အပွောငျးအရှစြေ့ေးကှကျမှာ ဝငျပါဖို့ မရှိပါဘူး။ အဓိက ခံစဈမှူးတှေ မပါဘဲ တရာသီလုံး သှားဖို့တော့ ခကျခဲပါလိမျ့မယျ။ လူသဈချေါမယျဆိုရငျတော့ ဂိုးမကျဇျ နဲ့ ဗနျဒိုကျနရောကိုပါ လုယူမယျ့ အဆငျ့အတနျးမီ ခံစဈမှူး ချေါသငျ့ပါတယျ။ ယူရို ၄၂ သနျးနဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ရမယျ့ အူပါမီကာနိုကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ရပါလိမျ့မယျ။
လကျစတာကို နိုငျပွီး အိမျကှငျး ၆၄ ပှဲဆကျ ရှူံးပှဲမရှိစံခြိနျကို တငျထားခဲ့ပါပွီ။ လကျရှိ ကစားပုံအရ ခယျြလျဆီးရဲ့ ၈၆ ပှဲ စံခြိနျကို ရိုကျခြိုးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျထားပါတယျ။ ဒီစံခြိနျအရ ကလော့ပျနဲ့ သူ့အသငျးသားတှဟော ထိပျတနျးအဆငျ့မှာ ဘယျလောကျထိ ခွစှေမျးတညျငွိမျထားလဲဆိုတာကို ပွသလိုကျပါတယျ။ တျောရုံတနျရုံ မဆိုထားနဲ့၊ အဆိပျပွငျးလှနျးပါတယျဆိုတဲ့၊ ဘကျတူတဲ့ အသငျးတှလေညျး တခကျြမှားတာနဲ့ လညျစငျးခံသှားရပါလိမျ့မယျ။ ပွိုငျဘကျမရှေးတဲ့ အနျဖီးလျ ခံတပျမွဟော သားသတျကှငျးစဈစဈ ဖွဈလာပါပွီ။
ZAWGYI: ဒီတပတ်မှာတော့ လီဗာပူးလ် အမာခံပရိသတ်တဦးဖြစ်တဲ့ Hasib Afzal နဲ့ အမေးအဖြေ ဆွေးနွေးခန်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမြင်တွေကို ရှုစားကြည့်ကြပါဦး။
လက်စတာကို နိုင်ခဲ့လို့ ဘယ်လောက်အကျိုးကြီးမားခဲ့လဲ?
ဒီရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ ဒါကို သံသယ မရှိပါဘူး။ ပွဲမတိုင်မီမှာတော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ဗန်ဒိုက်၊ ဂိုးမက်ဇ်နဲ့ အာနိုးလ်ဒ်တို့ မပါဝင်တဲ့ ခံစစ်ကို ဂျေမီ ဗာဒီတောင် ဝင်မတိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဟာ​ဗေး ဘားနက်စ်ရဲ့ အခွင့်အရေးတကြိမ်က လွဲရင် လက်စတာဆိုတာ ရေမြွေဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်စတာနဲ့ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ နာဘီ ကီတာ ဒဏ်ရာရခဲ့တာကို ဘယ်လိုပြောမလဲ?
သူ သိပ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ဖန်တီးမှုကနေ ကားတစ် ဂျုံးစ်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ရခဲ့တယ်မလား။ လက်စတာကွင်းလယ်ကို အပြတ်အသတ်သာစေခဲ့တယ်။ High Press လုပ်ပြီး ဘောလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာ အတက်အဆင်းမှန်ခဲ့တယ်။ ဒါက ကီတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပြခဲ့ပေမယ့် တံကောက်ကြောဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာက ကံဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ကန်တာရာ ပြန်ပါလာမှာက ဘယ်လောက် အရေးပါလာနိုင်မလဲ?
သိပ်ကိုထူးကဲသွားမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဖာဘင်ညိုနဲ့ ဟန်ဒါဆန်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ နံပါတ် ၆ နေရာကို တာဝန်ယူနိုင်သလို သူက သာမန်ကွင်းလယ်ထောက်တိုင်တဦးထက်ပိုပြီး ကွဲထွက်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်က အသင်းရဲ့ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကြာကြာထိန်းသိမ်းထားစေနိုင်တာပါ။ ဒီတော့ လီဗာပူးလ်အနေနဲ့ ဘောလုံးကို ကိုယ့်ခြေထဲမှာ တချိန်လုံး ဘောလုံးကိုင်ထားပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို မောင်းကစားလို့ ရပါတယ်။ ဗဟိုခံစစ်မှာ ကစားမယ့် ဖာဘင်ညိုကိုလည်း လွတ်လပ်သွားစေမှာက သူပေးလာမယ့် အပိုဆုဖြစ်ပြီး ခံစစ်ပိုင်းလုံခြုံမှုကို ရပါလိမ့်မယ်။
ပွဲစဉ်ဇယားရေးဆွဲမှု နဲ့ ၃ ကြိမ်သာ လူစားလဲခွင့်အတွက် ကလော့ပ် ဒေါသထွက်နေတယ်နော်?
ဒါက ကလော့ပ်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဂွာဒီယိုလာနဲ့ ဆိုးလ်ရှားတို့လည်း စောဒကတက်နေကြတဲ့ အရေးကိစ္စပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ခြေစွမ်းပုံစံကို မြင်ချင်ရင် ကစားသမားတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အနားယူချိန် လိုအပ်တာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဥရောပပွဲစဉ်တွေကိုပါ တပြိုင်တည်း ကစားနေရတဲ့ အသင်းကြီးတွေကတော့ လက်ရှိ ပွဲဆက်မှု အခြေအနေကို စိတ်ပျက်ကြမှာပါပဲ။ လီဗာပူးလ် နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာအကျပ်အတည်းက ဒီပြဿနာအတွက် အကောင်းဆုံးသက်သေ ဖြစ်နေပါတယ်။
အတ္တလန်တာကိုနိုင်ရင် ၂ ပွဲကျန်အနေအထားနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်မယ့်အပေါ်အမြင်? ဒါက ဘယ်လောက် အရေးကြီးမလဲ?
ဒဏ်ရာအကျပ်အတည်း ကြုံနေရတဲ့ ကလော့ပ်အတွက်တော့ သူ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေကို အနားပေးခွင့် ရသွားပြီပေါ့။ မီနာမီနို နဲ့ ဆီမီကက်စ်တို့ အခွင့်အရေး ရလာမှာပေါ့။
ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်ဖို့ ဇန်နဝါရီမှာ ဗဟိုခံစစ်မှူးတယောက် ခေါ်နိုင်လား?
စိတ်ကြိုက်ကစားသမား ရှာမရသရွေ့ လီဗာပူးလ်က အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ဝင်ပါဖို့ မရှိပါဘူး။ အဓိက ခံစစ်မှူးတွေ မပါဘဲ တရာသီလုံး သွားဖို့တော့ ခက်ခဲပါလိမ့််မယ်။ လူသစ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဂိုးမက်ဇ် နဲ့ ဗန်ဒိုက်နေရာကိုပါ လုယူမယ့် အဆင့်အတန်းမီ ခံစစ်မှူး ခေါ်သင့်ပါတယ်။ ယူရို ၄၂ သန်းနဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ရမယ့် အူပါမီကာနိုကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
လက်စတာကို နိုင်ပြီး အိမ်ကွင်း ၆၄ ပွဲဆက် ရှူံးပွဲမရှိစံချိန်ကို တင်ထားခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိ ကစားပုံအရ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ၈၆ ပွဲ စံချိန်ကို ရိုက်ချိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီစံချိန်အရ ကလော့ပ်နဲ့ သူ့အသင်းသားတွေဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ထားလဲဆိုတာကို ပြသလိုက်ပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ မဆိုထားနဲ့၊ အဆိပ်ပြင်းလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့၊ ဘက်တူတဲ့ အသင်းတွေလည်း တချက်မှားတာနဲ့ လည်စင်းခံသွားရပါလိမ့်မယ်။ ပြိုင်ဘက်မရွေးတဲ့ အန်ဖီးလ် ခံတပ်မြေဟာ သားသတ်ကွင်းစစ်စစ် ဖြစ်လာပါပြီ။